ဆရာမောင်ခိုင် 21 May 2020
We praise and we worship God. Worshiping is not wrong, but the gathering was. Do not be discouraged. Admit your human mistake and be proud of your spiritual fervency.
“ဒေးဗစ်လားနှင့် ဦးဝေထွန်းသည် ဧပြီ ၇ က မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ညီအစ်ကိုများအသင်းတော်ပိုင် ပေ ၂၀ ပတ်လည်ကျယ်ဝန်းသည့် အခန်းတစ်ခန်းအတွင်း “လူစုလူဝေး” နှင့် နှစ်သိမ့်ဓမ္မတေး သီဆိုဆုတောင်းပြီး လူမှုကွန်ရက်တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့မှုကြောင့် တရားစွဲဆိုခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးမိုးဆွေက ပြောသည်။”
(Ref. Myanmar Now, ချမ်းသာ, Published on May 20, 2020)
နှစ်သိမ့်ဓမ္မတေး သီဆိုတယ် ဆိုပါလား။ နာရေးမှ မဟုတ်တာ။ ချီးမွမ်းသီချင်း ဆိုတယ်၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ချီးမွမ်း ကြတယ် လို့ သုံးပါလား။ It wasalive streaming of worshipping and preaching, right? အဲဒီ “နှစ်သိမ့်ဓမ္မတေး” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက ကိုယ်(ခရစ်ယာန်)တွေ ဘက်က စသုံးတာ ဆိုရင်တော့ မဖြစ်သင့်ပါ။ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တယ်၊ လူစု တရားဟောတယ် လို့ပြောလိုက်ရင် အမှုပိုကြီး သွားမှာစိုးလို့ သနားသက်ညှာ စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြောတာလား။ ကြောက်တတ်ရင် အစကတည်းက မလုပ်သင့်ပါ။ ပေါလုနှင့် သိလတို့တောင် ထောင်ထဲမှာ သီချင်းဆိုတာကို ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလျက် သီချင်းဆိုတယ် လို့ပဲ သုံးထားပါတယ် (တမန်၊ ၁၆း၂၅)။
ဒီကိုဗစ်ကြီး နောက်ပိုင်း သင်းအုပ်ဆရာ အများအပြားက အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တရား‌ဟောနေ ကြတာပါပဲ။ အဲ့အထဲမှာ အတော်များများက အွန်လိုင်းကနေ တရားမဟောဖူး ကြပါဘူး။ မတတ်သာလို့ ကြိုးစား ကြရတာ၊ မလုပ်တတ် လုပ်တတ်၊ အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့နဲ့။ တောဘက် နယ်ဘက်က ဆရာတချို့ ဆိုရင် Facebook ပေါ်ကနေ Live လွင့်နေတုန်း ကြက်တွန်သံ၊ ဝက်အော်သံ၊ ခွေးဟောင်သံ၊ သားသားမီးမီးတွေ ငိုသံ ရယ်သံ.. စုံလို့ စည်စည်ကားကား တောင် ရှိသေးတယ်။ Social Distancing ဘောင်လွတ်ရင်ကို ကြိုက်သလို ဟောလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်တွေလို သင်းအုပ်ဆရာ တရားဓမ္မ ဟောသူတွေ မပြောနဲ့၊ အခြောက်တွေတောင် လိုင်းပေါ်ကနေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် Live လွင့်၊ ကဲပြ ကပြနေကြတာ။ အထည်ဆိုင် သမားလည်း ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့ မရတော့ဘူး။ အွန်လိုင်းကနေ အထည်တွေ ချပြ ခင်းပြ၊ အသံဝင်အောင်ကို ရှင်းပြ Live လွင့် ရောင်းနေကြတဲ့ အချိန်လေ။
ဆရာ ဒေဗစ်လား ဆိုရင် အွန်လိုင်းနဲ့ အတော့်ကို ပနံသင့် ရင်းနီးပြီးသား Live Streaming လုပ်နေကြ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာအတိုင်း အသက်ရှင်ရင် ကိုဗစ်မကူး စေရဘူးလို့ အာမခံ တာက သူ့အယူအဆနဲ့ သူ့ယုံကြည်မှု ဆိုတော့ ဒါနဲ့ တရားဆွဲလို့ မရနိုင်လောက်ပါဘူး။ (ကိုဗစ်က အများထင်သလို တိရစ္ဆာန်က စကူးလာတာ မဟုတ်ဘူး၊ biochemical weapon leak ဖြစ်တာလို့ ပြောတာကတော့ တရုတ်တွေက စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်တယ်)။ သူ့ရဲ့ ‌‌ ဟောပြောချက်တွေက ကျမ်းစာနဲ့ မညီဘူးလို့၊ တရားလက်လွတ် ဖြစ်ပါတယ်လို့၊ ဒီအသင်းတော် ဟိုအသင်းတော်ရဲ့ ခံယူ ယုံကြည်မှုနဲ့ မကိုက်ညီ မတိုက်ဆိုင် ပါဘူးလို့ ဘယ်အသင်းတော် ဂိုဏ်းဂဏကမှ သဘောထား ထုတ်ပြန် ကန့်ကွက် တားမြစ်တာမျိုး မလုပ်ပါဘူး။ ဒါဒီမိုခေတ်၊ “လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲ ခွင့်ရှိသည်” လေ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ခရစ်ယာန်ထဲမှာ ဂိုဏ်းဂဏ ရာချီရှိတာလေ။ ဘာဆန်းတာမှတ်လို့။
သူငါ့ကို မုန်းနေတယ်၊ ရန်ပြု သတ်ဖြတ်ချင် နေတယ် ဆိုရုံနဲ့ တစုံတယောက်ကို ဖမ်းလို့ မရပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်နေသည် ဖြစ်စေ ကိုယ့်ကြောင့် တပါးသူ သေဆုံးရင် အနည်းဆုံး လူသေမှုနဲ့တော့ အပြစ်ခံရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက် ကလေးတော့ common sense ရှိဖို့ သင့်ပါတယ်။ တရား လက်လွတ် မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ သွားလာမှုနဲ့ လူစုလူဝေး တွေကို ထိန်းချုပ်ခြင်း အမိန့်တွေ (Movement Control Order) ထုတ်နေကြတာ ခရစ်ယာန် အများစုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ အပါအဝင်ပါပဲ။
လုပ်တော့ လုပ်ပြီးပြီ။ ဖြစ်ပြီး ပျက်ပြီးပြီ။ အွန်လိုင်းကနေ တရားဟောတာကို ကိုယ်တိုင် လာရောက် နားထောင်သူ နဲနဲများသွားလို့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ မတော်တဆ ရောဂါကူးစက်မှု ဖြစ်သွားတယ်။ လုပ်ရဲရင် ခံရဲရမယ်။ တုန်းပူ သီချင်းလို ယုံကြည်ရာ ပေါ့။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အသက်ကိုတောင် ပေးဆပ်ရဲ ကြပါတယ်။ သရဲဘောကြောင်တဲ့ အသုံးအနှုံးမျိုးကို မသုံးစေချင်ဘူး။ တရားဟောတာက တရားဟောတာပဲ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လူစုလူဝေး ဖြစ်သွားတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရောဂါ ကူးစက်မှု ဖြစ်သွားတယ်။ မှားသွားတယ်။ ဆိုတဲ့ ဓမ္မသီချင်းတွေ ကလည်း နှစ်သိမ့်တာတွေ၊ အားပေးတာတွေ၊ လှောင်ပြောင် တာတွေ မဟုတ်ကဟုတ်က ခေါင်းစဥ်မတပ်နဲ့။ အသက်ရှင်တဲ့ ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ချီးမွမ်းသီဆိုတယ်။ We praise and we worship God. Worshipping is not wrong, but the gathering was. Do not be discouraged. Admit your human mistake and be proud of your spiritual fervency.
#preaching #worship #myanmar #christian #religion #church #covid_19 #movement_control_order #david_lah #live_streaming #social_distancing
Acne Laser treatment ဝက်ခြံကို လေဆာ နဲ့ ကုသခြင်း
နကၡက္မွားတဲ့ ဖူးစာ အပိုင္း(2)